Lenovo Tab M7 na Tab M8, mbadamba ụrọ ọhụrụ ndị dị ọnụ ala | Gam akporosis
Lenovo Tab M7 na Tab M8, mbadamba ụrọ ndị ọhụrụ na ọnụ ala
Mbadamba ụrọ smart Lenovo ọhụrụ abanyela n'ahịa, ha bụ Tab M7 na M8. Ndị ụlọ ọrụ China emeela ka ndị ọrụ gọọmentị dị ka ụzọ abụọ ha nwere akụ na ụba na ọfụma nke ga-arụ ọrụ karịa otu iji mezuo ihe ha kwere na ya.
Ngwaọrụ ọhụrụ abụọ a na - ewetara onwe ha ọtụtụ myirịta, mana o doro anya na Tab M8 kachasị dị elu na onyinye maka ndị ọrụ chọrọ ntakịrị karịa Tab M7 ga - enye, anyị gosipụtara nke a ugbu a.
3 Nye ọnụahịa na nnweta
Anyị ga-amalite site na ikwu maka mbadamba mbadamba akwara ugbu a. Ọ nwere 7-anụ ọhịa diagonal ngosipụta WSVGA, yana ihe nhazi 8321 GHz quad-isi MediaTek MT1.3 maka ụdị Wi-Fi, ebe usoro LTE na-akwado ya site na MediaTek MT8765B chipset, nke nwere ihe dịka nkọwa dị ka chipset akpọrọ.
Abịa na 1/2 GB nke Ram na 16/32 GB nke nchekwa dị n'ime na nkwado maka expandable nchekwa nke ihe ruru 128GB, n'otu n'otu. A kwadebere gam akporo Oreo Go na ụdị 1 GB Ram, ebe ụdị 2 GB na-abịa na Android Pie (Go Edition). Banyere ngalaba foto, ọ na-eji ihe mmetụta igwefoto 2 megapixel na azụ yana ihe mkpuchi yiri ya na ihu. Na mgbakwunye, ọ gụnyere nkwado maka 4G (nhọrọ), Wi-Fi 802.11 b / g / n, Bluetooth 4.2, GPS na jaket ọdịyo 3.5 mm. O nwere igwe okwu n’iru ma nye ya batrị 3.450 mAh nke n’enye gi ihe dika elekere iri nke nlere vidiyo ma obu nyocha.
Lenovo Tab M8 nwere ihuenyo 8-inch. A na-enye ya na nhọrọ mkpebi abụọ: HD 1,280 x 720 pikselụ na FullHD 1,920 x 1,200 pikselụ, ma jiri nits 350 nits.
El SoC MediaTek Helio A22 2 GHz quad-isi dị n'okpuru mkpuchi nke ọnụ ahịa a, yana 2/3 GB nke RAM na 16/32 GB nke nchekwa dị n'ime, n'otu n'otu, yana nkwado maka mmụba site na microSD. O nwekwara igwefoto azụ nke 5 MP na onye na-agba égbè 2 MP.
Banyere nhọrọ njikọta, na-akwado 4G (nhọrọ), Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.0 na GPS. Ọ na-abịa na nkwupụta ụda nke 3.5mm na ọkà okwu Dolby Audio na-ege ntị. Ngwaọrụ na-arụ ọrụ sistemụ gam akporo gam akporo ma jiri ya rụọ ọrụ site na batrị 5,000 mAh ruo elekere iri na abụọ nke vidiyo vidiyo ma ọ bụ awa 12 nke nchọgharị.
Bido n’Ọktọba, ụlọ ọrụ ndị China ga-ebido ire mbadamba nkume abụọ a na Iron Gray na Platinum Gray agba maka ụdị niile, ebe naanị Lenovo Tab M7, na mgbakwunye na ndị a, ga-enwekwa ọdịiche na Onyx Black. Ahịa nke nsụgharị niile bụ:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Lenovo Tab M7 na Tab M8, mbadamba ụrọ ndị ọhụrụ na ọnụ ala
Vivo Z1x enweelarị ụbọchị ngosipụta nke gọọmentị
Huawei Mate 30 nwere ike igbu oge mbido ya